Oge Kachasị Mma n'Ụwa Ịga ski - ULLER
Taa na Uller anyị chọrọ ịgwa gị okwu nkwado nlekiri na ebe kacha mma n'ụwa maka ski. Anyị ga-esi na Spen pụọ wee gaa ebe 10, na-aghọgbu kpamkpam site na ndepụta nkasi obi, ihe ụtọ na ihe ụtọ nke ndị eze na ndị na-eme ihe nkiri Hollywood.
Baqueira Beret, na Catalonia, ọ bụ ebe mbụ anyị chọrọ ime ka ọ pụta ìhè. Ọ bụ ebe obibi nke ezinụlọ eze Spanish na-ahọrọ ugboro ugboro maka ezumike oyi ha kemgbe 1974, nke a bụ njem mbụ nke ndị eze Don Juan Carlos na Doña Sofia hụrụ n'anya na ndagwurugwu Aran, ịma mma ya na nkasi obi na ebe ntụrụndụ. nyere ya Pleta. N'ihi ya, ha na ezinụlọ ha laghachiri mgbe afọ abụọ gachara iji mee ememe mbata nke afọ ọhụrụ na oriri nke ndị Magi ji oké ịnụ ọkụ n'obi n'akụkụ ezinụlọ dum, karịsịa site n'aka ụmụntakịrị, ndị bụ mgbe ahụ Prince Felipe na nwa ọhụrụ Elena. na Cristina. Ewubere ya dị ka ebe ezumike oyi maka ezinụlọ eze Spanish, ọkachasị ruo n'afọ 90.
A na-enye ndị Bourbons otu n'ime chalet nke Resort oge ọ bụla ha gara na ndagwurugwu, yana ọrụ ha, iji kwalite onwe ha dị ka ebe njem nlegharị anya. Mgbe e mesịrị, mgbe ụmụ ọhụrụ Elena na Cristina malitere ezinụlọ ha, a na-amụba chalet iji nabata ndị ọhụrụ niile. Ebe Eze Felipe dị ugbu a na Leticia, ọ nweghị nleta na chalet. Mana Eze Don Felipe dị ugbu a nwere ọtụtụ ihe ncheta nwata n'ebe ahụ. Ọ ga-ekwe omume na n'afọ ọ bụla ezinụlọ eze Spanish ugbu a ga-alọghachi ka ha nwee ezumike ekeresimesi.
Akụrụngwa nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ a gụnyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ, spa, ọdọ mmiri ọkụ, onye na-edozi isi na ụlọ ụmụaka. Nke a na ọnọdụ ya dị n'ụkwụ nke mkpọda ahụ emeela ka ọ bụrụ onye ruru eru inweta ihe nrite ski 2018, 2019, 2020, ọ na-enyekwa ebe ntụrụndụ ahụ gbakwunyere okomoko nke na-eme Baqueira otu n'ime ebe ntụrụndụ kacha mma n'ụwa.
Na France, Ụlọ akwụkwọ 1850, na Ndagwurugwu Tarentais, nke dị na French Alps, bụ otu n'ime ebe ski kasị ukwuu n'ụwa. A maara ya dị ka Les Trois Valleés, ma nwee 600 kilomita nke mkpọda a na-edozi nke ọma, jikọtara ya na igwe ski 165 na-arụ ọrụ nke ọma. Jupụtara na chalets okomoko, ụlọ oriri na ọṅụṅụ Michelin-starred na ụlọ oriri na ọṅụṅụ abalị, a na-ewere ya dị ka St. Tropez nke egwuregwu oyi ma na-eleta ya site na ogologo ndepụta nke ndị na-eme ememme. Ụfọdụ ihe atụ nke ndị a ma ama bụ ndị a hụrụ ka ha na-agba ski gburugburu ebe ntụrụndụ bụ: Prince William na Kate Middelton (ndị Dukes nke Cambrige), Giorgio Armani, Madonna, Robbie Williams, George Cloneey, Christina Aguilera, Arnold Schwarzenegger, Geri Halliwell, Román Abramóvich , the Ezinụlọ Saudi Royal ma ọ bụ Donatella Versace.
KLOSTERS, GSTAAD, SERMATT NA SANKT MORITZ (Switzerland)
Ugbua na Switzerland, ebe ugwu mara mma na ebe ntụrụndụ ski ahọpụtara na nke a pụrụ ịdabere na ya na-amụba, n'agbanyeghị na obodo ahụ pere mpe karịa ndị ọzọ, ọ nwere ọtụtụ onyinye ndị ọzọ dị adị dịka Klosters, Gstaad, Zermatt na Sankt Moritz.
Klosters O nweela oge gara aga nke obodo ọrụ ugbo nke bịara mara dị ka "Hollywood on the Rocks" n'ihi na n'ime 50 nke ọlaedo, ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Chesa Grischuna Ndị kpakpando Hollywood na-emekarị ya dịka Greta Garbo, Paul Newman, Gregory Peck ma ọ bụ Gene Kelly. Nke nta nke nta obodo ahụ ghọrọ nnukwu nnukwu na nke pụrụ iche, mana ọ gara n'ihu na-echekwa ụdị ọdịnala ya.
Gstaad Ọ bụrụla ebe nhọrọ ski maka ndị na-ese ihe dị ka onye na-eme ihe nkiri Julie Andrews, onye kwuru banyere ebe ahụ na ọ bụ “paradaịs ikpeazụ n'ụwa nzuzu” ma ọ bụ onye na-eme ihe nkiri Roger Moore, onye nke atọ ga-eme egwuregwu na agwa James Bond maka. nke a maara nke ọma e akụkọ ihe mere eme saga n'etiti afọ 1973 ruo 1985. Onye omee, bụ onye a mụrụ na 1927 ma nwụọ na Switzerland na 2017 site na ọrịa cancer, mgbe ọ dakwasịrị Gstaad n'anya kwagara ebe a na 1978 na ezinụlọ ya na-enye udo nke uche. ụmụ ha atọ, bụ ndị tolitere n'ebe ahụ ma ha mụtara ski fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isiokwu amanye. Ọ bụ mpaghara dị jụụ ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ ugwu na nzuzo. Ọ nwere ọtụtụ ihe omume na-adọrọ mmasị dị ka ohere nke ịgba ski na glacier, a snowpark, njem nlegharị anya oyi, ịgba ski nke mba ma ọ bụ njem na njem abụba egwu dị n'èzí. Ma ndị ọbịa ya a ma ama na-ahọrọ ya ọ bụghị naanị maka egwu ya na ihe omume ya, kamakwa maka ọkaibe nke ụlọ ahịa ndị na-emepụta ihe a ma ama, ọmarịcha ugwu obodo ikuku na ihe nkiri ya na ụlọ mmanya ọzọ.
Zermatt e ji avant-garde na imewe nke ije, ebe ọ bụ na obodo omenkà na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ Heinz Julen emebela nke ya echiche nke a backstage nkwari akụ, nke nnukwu ọnụ ụlọ-ụdị ụlọ na nnukwu ugegbe windo na-ewepụ ohere nkewa n'ime na na na. okike. Na mgbakwunye, Zermatt na-etu ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahọpụtara na ụgbọ ala ụgbọ ala kachasị elu na Europe (mita 3.885) nke na-eduga n'ogologo 13 km.
St Moritz O nwere ike ịbụ ebe egwuregwu ski kacha ama ama n'ụwa, nwere ọdịnala kachasị ogologo na akụrụngwa zuru oke maka ịme egwuregwu asọmpi oyi, ebe ọ na-akwado asọmpi Olimpik Winter ugboro abụọ. O nwere ebe a na-eme ice ice, yana ọdọ mmiri oyi kpọnwụrụ akpọnwụ ebe ị nwere ike na-eme egwuregwu polo, cricket, gọọlfụ, ịgba ọsọ inyinya na ice, ski, snowboarding na sledding.
Ndị na-eme ihe nkiri, ndị na-ese ihe, ụdị na ndị a ma ama dị ka Hugh Grant, David na Victoria Beckham, Kylie Minogue, Elisabeth Taylor, John Lennon, Sofia Loren, Audrey Hepburn, Coco Chanel ma ọ bụ Eze Carlos Gustavo nke Sweden na-eleta ya ma ọ bụ mgbe niile. Ndị mmadụ nke ọgbọ niile na-abịa St. Moritz ka ski na-ekpori ndụ n'oge ezumike oyi, echiche nke onye ọchụnta ego bụ Johannes Badrutt sitere n'iwu ụlọ mbikọ na 1850 nke ga-agbanwe ghọọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ okomoko. Ìhè ya na-egbukepụ egbukepụ n'oge oyi adọtakwara njem nlegharị anya, iji gbaa abụọ n'ime ihe nkiri James Bond nke ga-abụ Roger Moore na nke ahụ ga-abụ ndị na-eme ihe nkiri nke onye na-eme ihe nkiri maara wee họrọ Switzerland ka ọ bụrụ ebe obibi ọhụrụ ya dị jụụ. Ihe nkiri ndị a ga-abụ: Onye nledo nke hụrụ m n'anya (1977) na Panorama igbu (1985). Ọdụ ụgbọ ahụ dọtakwara ndị ama ama dịka Alfred Hitchcock, Robert de Niro ma ọ bụ Claudia Schiffer. N'aka nke ọzọ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ okomoko, Michelin star restaurant na ọbụna isi ụlọ ọrụ nke ama ama art gallery. Hauser & Wirth, na-enye St. Moritz a aprè-ski nnukwu ọkwa.
Ọ dị anyị ịtụnanya na nke ahụ Coco Chanel Ọ ga na-eleta ebe a na-eme egwuregwu ski mgbe niile n'oge oyi nke 30s ma ga-eji ya mee ihe dị ka ihe ngosi iji gosi ahịrị egwuregwu nke ika ya. Na sweaters kpara akpa, uwe ogologo ọkpa corduroy na, n'ozuzu, uwe ndị e mere maka egwuregwu na-enye ohere ịgagharị na nke ahụ n'oge ahụ na-anọchi anya nnukwu ihe ọhụrụ.
Megève, bụkwa na France, bụ obodo ọrụ ugbo nke Baroness Noémi de Rothschield mere ka ọ bụrụ ebe ezumike mara mma, onye na 1914 kpebiri na obodo ya kwesịkwara inwe St. Moritz nke ya. N'ebe ahụ, a hụrụ ndị a ma ama dị ka Duchess nke York, Catherine Deneuve na Roger Vadim, onye nduzi ihe nkiri na onye mmekọ Catherine site na 1961 ruo 1964, na-ekpori ndụ egwuregwu oyi, onye ha na nwa ha nwoke bụ Christian na nwa ya nwanyị. , Nathalie Vadim. Ọzọkwa Audrey Hepburn, onye na mgbakwunye na agbapụ ihe nkiri na a ọdụ Charade Ya na Cary Grant nọ na 1963, ya na di ya Mel Ferrer nọ na 1966. Mgbe niile na-ahapụ anyị ka anyị nwee mmasị na ụdị ya pụrụ iche nke anyị ga-achọ ịhụ ịmaliteghachi na mkpọda ugwu. A na-ahapụ anyị na nsụgharị nke ijikọta agba gbara ọchịchịrị n'ụzọ dị egwu na nke anyị hụrụ n'anya. Dị ka ọ ga-adị ka anya Audrey yi maka ịse ihe nkiri ahụ n'otu ebe egwuregwu ski. Chocolate na-acha aja aja oyi akwa uwe ogologo ọkpa, ya na onye na-egbu ya (mkpuchi siri ike) na uwe aka dabara adaba, na-ejikọta ya na oji zuru oke nke uwe mkpuchi astrakhan dị mkpụmkpụ, okpu nke otu ihe na iko oval.
Na Italy, Ihe mgbochiN'ịbụ ndị Dolomites gbara ya gburugburu, a na-ewere ya dị ka otu n'ime ebe mara mma kachasị mma n'ụwa na otu n'ime mkpọda ski mara mma. chic si Ịtali. Ọ makwa ka ọ ga-esi na-atụgharị ọnụ ọnụ ya dị elu, nke nwere ihe karịrị 1.000 kilomita nke mkpọda ski; ya na klaasị elu nke ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, boutiques na, na nkenke, ọmarịcha ikuku na-adọrọ adọrọ.
Ebe egwuregwu ski kacha ewu ewu na North America. Ndị na-eme ememme na-eto ya nakwa na ọ nwere kilomita 193 skiable na, nakwa n'echiche nke ọtụtụ, snowpark kacha mma n'ụwa. Mmalite nke obodo ahụ bụ ngwuputa ihe, na-achọpụta ọlaọcha nke dị na mpaghara ahụ. Aha ya bụ Aspen Molamona bekee, osisi nke juru na mpaghara. Ọ malitere ọrụ ya na egwuregwu ugwu n'afọ 1946 n'ihi onye ọchụnta ego Walter Peapcke bụ onye gbanwere obodo ahụ ka ọ bụrụ ebe ntụrụndụ na ski nke ama ama.
Maka oge ekeresimesi, Aspen na-ejupụta kwa afọ na ndị a ma ama bụ ndị a na-ahụ na ezinụlọ ha yana ọdịdị ha après-ski kasị iche. Ya mere, ruo afọ ole na ole, ọ kpọrọ aha ụdị ejiji nke ya na ọ bụ ya Aspen anya, nke a na-emekarị ma na-ebu ya ọbụna n'obodo ndị ọzọ nke ụwa. Ọ na-agụnye iyi, dị ka ndị a ma ama na-eme, ụdị nke jupụtara na nkasi obi na nchebe megide oyi. Anya Aspen nwere uwe aji a chọrọ mma, akwa ogologo ajị anụ, akwa akwa ma ọ bụ uwe ajị anụ, anoraks padded, sweta ajị anụ na oyi ma ọ bụ ihe eji ekeresimesi, leggings siri ike na nke ebipụtara ma ọ bụ ọbụna flannel ma ọ bụ uwe ogologo ọkpa pajama, akpụkpọ ụkwụ na-eji ntutu dị n'ime ma ọ bụ sọks. pụọ na ajị anụ, na ngwa ndị dị ka okpu nwere nnukwu tassels, ntị ntị, ọbụna okpu ajị anụ na uwe aka. N'ikpeazụ, ihe nkpuchi imecha anya.
Kim Kardasian, Leonardo di Caprio, Paris Hilton, Gwenth Paltrow, Kate Hudson, Golidie Hawn, Thalia, Maria Carey, Melanie Griffit na nwa ya nwanyị Stella del Carmen ma ọ bụ Ivanka Trump, bụ ihu ndị Aspen hụburu. E nwekwara ọtụtụ ụlọ okomoko nke ndị na-eme ihe nkiri Hollywood, n'ime ha nke Kevin Costner, nke alụmdi na nwunye Goldie Hawn na Kurt Rusell ma ọ bụ nke onye isi oche Amazon, Jeff Bezos.
Niseko, nke dị na Japan, nwere snow karịa oge ọ bụla ọzọ. Ogologo snow ya dị mita 15 nke ọkara na-eme ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche, yana mkpọda ọkụ na-enye gị ohere ịme ski n'abalị, ebe ọ bụ na ngafe na-arụ ọrụ awa 24 kwa ụbọchị. Nke a dị anyị ka ọ dị anyị chic: inwe ike ski n'abalị. Ọ na-ejukwa anyị anya na mmasị maka egwuregwu oyi nke ha na-egosi na ha maara otú e si eji ihe okike na-enye ha.
Ebee ka ị ga-esi ski n'oge okpomọkụ?
Na France: Tignes, Les Deux Alpes.
Na Switzerland: Zermatt
Na Norway: Strin
Na New Zealand: Wakapapa
Na Argentina: Cerro Catedral
Na Chile: El colorado
Ebee ka ndị ama ama na-aga ski?
Baqueira Beret na Spain, Courchevel na France, ST. Moritz na Switzerland, Aspen na Colorado.
Kedu ihe bụ ebe egwuregwu ski kacha n'ụwa?
Les atọ Vallées na France, mejupụtara Courchevel, Méribel, Les Menuires na Val Thorens Valley, bụ ndị mezuru 550 kilomita nke mkpọda ski.
Kedu ihe bụ ụlọ ezumike ski kacha elu na SPAIN?
Sierra Nevada Ọ bụ nke kachasị elu na Spain na nke kachasị ìhè, ebe ọ bụ na ọ nọ n'ebe ndịda ọ nwere ọtụtụ awa nke anyanwụ na ezigbo snow.
Olee ebe ndị eze SPAIN na-aga ski?
Jaca na 2017 bụ ebe snow ikpeazụ nke ezinụlọ eze Spanish, ha na ụmụ ha nwanyị Princess Leonor na Infanta Sofia letara.
Ihe ndị ọzọ: Njem na Ebe
Udiri Uhie Ushuaia Blue
Nye ọnụahịa7500 € 75.00 € Ụdị oge 18500 € 185.00 € Ị na-echekwa € 110
Nwa Blackki Hookipa /
Nye ọnụahịa6900 € 69.00 € Ụdị oge 19500 € 195.00 € Ị na-echekwa € 126